Sida Loo Beddelo Beteriga Barnawada & Barashada Nink
U Diyaar Garoobidda Beddelka Batalyada Nook.
Beddelida batoonka Barnes & Noble Nook eReader waa mid aad u sahlan marka aad ka fekereyso. Sawir iyo nuqul Barnes & Noble
Mid ka mid ah wax-qabad ku saabsan Barnes & Noble's classic Nook e-akhristayaasha waa in ay la yimaadaan batariga la isticmaali karo.
Waxaan ahay taageere weyn oo qalabka leh beteriyada la bedeli karo maxaa yeelay waxay dadka siiyaan fursado fara badan. Ka sokow macaamiisha u oggolaanaya in ay kordhiyaan qalabka saacadaha qalabka iyadoo la keenayo beteriga beddelka ah, batariyada leysku beddeli karo micnaheedu maahan inaadan u baahnayn inaad soo dirto qalabkaaga markii wakhtigeeda la helo ilo awoodeed cusub. Beddelku badanaa wuu ka raqiisan yahay (Tani waa qiimeynta sicirka batroolka, kaas oo ka koobnaan kara $ 20 ilaa $ 40). Iyo haddii aad ku ruxday mid ka mid ah akhristayaasha Nook ee hore, ka dibna waxaa laga yaabaa in waqti loo helo batari cusub.
Inkasta oo la ogaado sida loo bedelo batroolka Nook maahan mid deg deg ah, waa runtii ka sahlan inaad ka fakarto. Ka dib markii ay ku socoto haggid talaabo tallaabo tallaabo ah, waxaad noqon doontaa xirfad aad ku badasho xirfadahaaga Nook ee badalida xirfadaha saaxiibada iyo qoyska waqti aan waqti lahayn. Dhammaan waxaad u baahan tahay waa yar yar ee Phillips iyo farta fiiqan.
Ka qaadashada Nook's daboolka daboolka
Ka qaad daboolka dambe adoo farahaaga saaraya farqiga dhinaca dambe iyo dib u soo laabashada. Sawirka Jason Hidalgo
Tababarkan wuxuu ku saleysnaan doonaa Nook First Edition, laakiin dambe ee moodada sida Touch Touch waxay leeyihiin ilo awood leh oo beddeli kara, inkastoo ay isticmaalaan batari ka duwan. Hase yeeshee, eeg bogagga kuwa ku yaal dhinacyada Nook eReader? Kuwani waa inay ciddiyahaaga u soo baxaan si ay u furaan waxkasto adag. Waad kari kartaa dhamaan noocyada siyaabaha kala duwan, laakiin waxaad si cad u dooneysaa in aad dejiso boos aad ku siineyso leverage. Anigu waxaan ku guuleystay guusha laba waji leh laakiin natiijooyinkaaga way kala duwanaan karaan. Nasiib wanaag, cidina cidna lama jebin ama waxyeello u gaysatay sameynta barashadan.
Ka soo qaad Guddiga Dib-u-eegista Nook
Barnes & Noble Nook eReader leh daboolka dambe. Sawirka Jason Hidalgo
Markaad hesho daboolka gadaashiisa, Nook wuxuu u eg yahay sidan oo kale. (Maya, uma baahnid inaad shaqaaleysiiso sidan oo kale oo aan u isticmaali lahaa sawirka, waxaanan sameeynayaa si aan u sawiro hal sawir).
Qaadashada Baabuurka Nookoonka eReader
Sawirka Jason Hidalgo
Midigta midigta ah ee booska MicroSD waa qaab-qabsi toosan kaas oo lagu hubiyo qashin. Taasi waa batterigaaga halkaa.
Ka qaadashada waa in ay la socotaa qof kasta oo waligiis horay u soo qaaday batoonka taleefanka gacanta. Kaliya marka laga reebo waa cirifka kor ku xusan, kaas oo aad u baahan tahay inaad ku qaadato qalab yar oo Phillips ah si aad u hesho batteri.
Marka aad qaadatid baqtinta, fartaada ku rid faseexdaha qaab-qabadka oo ka soo saar beteriga. Si fudud oo macaan, sida ay yiraahdaan.
Sida loo geliyo Batariga Cusub ee Nookeeye eReader
Si aad u rakibtid batrool cusub, ku dhaji gudaha meesheeda adigoo ku dhejinaya qeybta hoose. Kadibna batteriga ku riix oo ku dheji markale. Sawir-sawireed Jason Hidalgo
Ku rakibida batoon cusub oo cusub waxay u eg tahay inaad ka saarto, marka laga reebo inaad dib u dhigto.
Marka hore u hubso in logoka Barnes & Noble uu ka baxsan yahay. Ka dibna ku billow adoo raacaya qaybta hoose ee bateriga si aad ugu xiratid kuwa ku haboon kuna riix bateriga.
Marka batterigu uu ku dhexjirto, ku dheji meel kale mar labaad.
Dib u rakibidda Nook Back Back / Rear Casing
Dib-u-dheji nambarka kiis-hawleedka kaddibna dib ugu dheji meel kale. Sawirka Jason Hidalgo
Sida battariga, dib u sameynta Nookka daboolkiisu waa sidii dib loogu celin lahaa.
Ka bilow qeybta hoose ee qalabka, ka dibna isku xir xiriiriyaha sare ee meelaha kala duwan. Marka ay isku xirmaan saxaafadda ilaa ay gujiyaan. Hubi dhinacyada si aad u hubiso in daboolka dambe dib loogu rakibo iyada oo aan jirin wax khasaare ah oo aan caadi ahayn.
Hambalyo. Hadda waxaad tahay Nook oo beddelaya khabiir ku takhasusay batroolka. Qeybta ugu wanaagsan? Uma baahnid inaad joogtid Holiday Inn habeenkii si aad u heshid aqoontaada cusub ee la helay. Kama baxaan oo ku dhufo, ama ha samayn, wax kasta oo ay tahay inaad sameysid waqtigaada.
Waa maxay caawiye Google iyo Sidee u isticmaali kartaa?
Sida loo qaato Tababarka Sawireynta ee LG G Flex
Sida loo isticmaalo Samsung Bixby
Sida loo isticmaalo xakamaynta Pie on Your Android
Sida loo Xaqiijiyo Caruur Your Android iyo Samee Kid saaxiibtinimo
Tilmaamaha Gaarka ah ee Wireless
Iskuday Tilmaamahan Google ee hadda ah
Horudhaca Shabakadaha Isku-jira ee Isku-jira
Sida Loo Sheego Fariin Gmail Dhammaan
Sidee looga hortagi karaa Muuqaalka laga soo dajinayo Sawirrada si toos ah
Sidee loo Isticmaalaa Jiliyaha Daawada
Waa maxay Amazon Cloud Player Service?
Pentax K-1 Dib-u-eegis DSLR
Sidee si toos ah u furi kartaa farriinta soo socota ka dib markii la gooyey Yahoo
Inaysan ku dhicin Windows Live Hotmail
Adobe InDesign Qodobbada Heerarka Degdegga ah ee CC
Fallout 3 Hubka iyo Ammooyinka Ammo
Xaqiijinta iMessage Android Bug ah Qalabkan Bilaashka ah
Sida Loo Beddelayo Cabbiraadaha ee Excel
Sida Loo Beddelo Ringtones on Your iPhone
Muxuu yahay geotagging?
Sida loo raadsado Boostada Windows Live Hotmail
Top 10 "Sida Adeeg" Qaybaha Xalinta